Nhau dzeBhaibheri: Kuberekwa kwaJesu Kusvikira Kurufu Rwake - Kero Yepamutemo yeIndaneti yeZvapupu zvaJehovha
Ngirozi Gabrieri yakatumwa kumukadzi muduku akaisvonaka anonzi Maria. Yakamuudza kuti aizova nomwana aizobata ushe samambo nokusingaperi. Mwana, Jesu, akaberekerwa muchitevere, maakashanyirwa navafudzi. Gare gare, nyeredzi yakatungamirira varume vanobva Mabvazuva kumwana muduku. Tinonzwa kuti ndiani akavaita kuti vaone nyeredzi iyeyo, uye kuti Jesu akaponeswa sei panhamburiko dzokumuuraya.
Tevere, tinowana Jesu, paanga ava namakore 12 okukura, achitaura navadzidzisi mutembere. Makore gumi namasere apashure Jesu akabhapatidzwa, uye ipapo akavamba basa rokuparidza Umambo nokudzidzisa raakatumwa naMwari kuzoita kupasi. Kumubetsera mubasa iri, Jesu akasarudza varume 12 ndokuvaita vaapostora vake.
Jesu aiitawo manenji. Akadyisa zvuuru zvavanhu hove duku shomanene nezvingwa zvishomanene. Akaporesa varwere uye kunyange kumutsa vakafa. Pakupedzisira, tinonzwa nezvezvinhu zvizhinji zvakaitika kuna Jesu mukati mezuva rokupedzisira roupenyu hwake, uye kuti akaurawa sei. Jesu akaparidza kwaanenge makore matatu nehafu, nokudaro CHIKAMU 6 chinofukidza nhambo yamakore anotipfuurei 34.
Pakatora nguva yakareba sei kubva pakafa Jesu kusvika pakanyorwa Evhangeri?